Yakachipa otomatiki Fertilizer kurongedza Muchina Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Automatic Packaging Machine?
Kavha Muchina weFertilizer unoshandiswa kurongedza fetiraiza pellet, yakagadzirirwa kuwanda kurongedza kwezvinhu. Inosanganisira mhando mbiri yebhaketi uye imwechete bhaketi mhando. Muchina une hunhu hwechimiro chakabatanidzwa, kuiswa kuri nyore, kuchengetedza zviri nyore, uye kunyatsoita kwakaringana kuri pasi pe0.2%.
Iine "inokurumidza, yakarurama uye yakagadzikana" - yakave yekutanga sarudzo yekupakira muindasitiri yekugadzira indasitiri.
1.Kushanda kuno shandiswa: yakakodzera kuruka mabhegi, masaga mapepa mapepa, masaga ejira nemapurasitiki, etc.
2. Chinyorwa: 304 simbi isina chinhu inoshandiswa muchikamu chekubata chemidziyo, iyo ine yakanyanya ngura kuramba.
Maumbirwo eAkagadzika Packaging Machine
Aotomatic kavha muchina chizvarwa chitsva chehungwaru kurongedza muchina hwakagadzirwa nekambani yedu. Iyo inonyanya ine otomatiki yekuyera mudziyo, irikupa mudziyo, yekusonera uye yekupakata mudziyo, komputa kutonga uye zvimwe zvikamu zvina. Iyo yekushandisa modhi ine zvakanakira zvine musoro chimiro, chitarisiko chakanaka, kugadzikana kushanda, kuchengetedza simba uye chaiyo kuyera. Otomatiki kurongedza muchina inozivikanwawo seye komputa yakawandisa yekupakata chikero, muchina mukuru unotora nekukurumidza, wepakati uye unononoka matatu-kumhanyisa kudyisa uye yakakosha kudyisa kusanganisa chimiro. Iyo inoshandisa epamberi yedhijitari frequency kutendeuka tekinoroji, sampling yekugadzirisa tekinoroji uye anti-kupindira tekinoroji kuti ione otomatiki kukanganisa muripo uye kururamisa.
Kushanda kweMuchina Packaging Machine
1. Mapato echikafu: mbeu, chibage, gorosi, soya, mupunga, buckwheat, sesame, nezvimwe.
2. Fertilizer mapato: feed particles, organic fetiraiza, fetiraiza, ammonium phosphate, hombe zvikamu zve urea, porous ammonium nitrate, BB fetiraiza, phosphate fetiraiza, potashi fetiraiza uye imwe yakavhenganiswa fetiraiza.
3. Makemikari zvikamu: zvePVC, PE, PP, ABS, polyethylene, polypropylene uye zvimwe zviwanikwa zvinhu.
4. Mapato echikafu: chena, shuga, munyu, hupfu uye zvimwe zvikamu zvekudya.
Zvakanakira otomatiki Packaging Machine
(1) Yekumhanyisa kurongedza yekumhanyisa.
(2) Iyo chaiyo yekuyera iri pazasi pe0.2%.
(3) Yakabatanidzwa chimiro, nyore kugadzirisa.
(4) Nemuchina wekutakura wekutakura uine huwandu hwakawanda hwehuwandu uye hwakanyanya kurongeka.
(5) Torera imupota sensors uye imupe pneumatic actuators, iyo inoshanda zvakavimbika uye kuramba nyore.
Otomatiki Packaging Machine Vhidhiyo Ratidza
Otomatiki Packaging Machine Model Sarudzo
Muenzaniso YZBZJ-25F YZBZJ-50F
Kuyera Range (kg) 5-25 25-50
Kururama (%) ± 0.2-0.5 ± 0.2-0.5
Kumhanya (bhegi / awa) 500-800 300-600
Simba (v / kw) 380 / 0,37 380 / 0,37
Kurema (kg) 200 200
Kunopindirana Saizi (mm) 850 × 630 × 1840 850 × 630 × 1840
Pashure: Kuisa & Kudyisa Muchina
Zvadaro: Yakapetwa Hopper Yakawanda Packaging Machine